प्रेरक प्रसंग : प्रयासकै कारण मानिस सफल हुन्छ — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : प्रयासकै कारण मानिस सफल हुन्छ
काठमाडौं – एउटा व्यक्तिले डौडको घोडा किन्या र तबेलामा बाँधेर राख्यो । तबेलामा उसले लेखेको थियो, ‘संसारकै सबैभन्दा छिटो कुद्ने घोडा ।’ उसले त्यसको रुप राम्रो बनाउन अभ्यास र तालिम दुबै गराएन । उसले त्यो घोडालाई दौड प्रतियोगितामा सहभागी गरायो । त्यो घोडा प्रतियोगितामा अन्तिम भयो । उसले तत्कालै साइनबोर्ड बदल्यो, ‘घोडाको लागि सबैभन्दा छिटो डौडिने संसार ।’
निस्क्रिय भएर अर्थाथ केही पनि नगरे मानिसहरु के गर्छन् ? उनीहरु असफल हुन्छन र भाग्यलाई दोष दिन्छन । दूरदृष्टि, साहस र गहिराई विनाको जीवन दृष्टिविहिनको अनुभव जस्तै हुन्छ । छोटो कमजोर बुद्धि भएका र अल्छि मान्छेहरु थोरै बाधा अवरोध भएको सरल बाटो रोज्छन् ।
एथ्लेटिक्सका खेलाडीहरु मात्र १५ सेकेण्डको पर्दशनका लागि १५ बर्षसम्म अभ्यास गर्दछन् । उनीहरुलाई सोध्नुहोस्, ‘के तिनीहरुले भाग्यलाई फेला पारेका छन ? उसलाई फेरी सोध्नुहोस्, ‘तपाईँ राम्रो काम गरेपछि कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ? उसले आफ्नो सामथ्र्य सकिएको बताउने छ । उसले त्यस्तो सोचेन भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरेको हुँदैन ।
हरुवाहरु जीवन अन्यायपूर्ण छ भनेर सोच्दछन । उनीहरु आफ्नो दुर्भाग्यको बारेमा सोच्दछन् । राम्रो अभ्यास गरेको र राम्रोसँग खेलेको व्यक्ति पनि दुर्भाग्य पाउँदछ तर एक दिन त्यसलाई जितेर अघि बढ्छ भन्ने तिनीहरु सोच्दैनन् । त्यही नै मुख्य फरक हो ।
राम्रो अभ्यास गर्ने खेलाडीको पिडा सहने शक्ति बढ्दछ । किनभने उसले राम्रो पर्दशनका लागि मात्र होइन आफ्नो चरित्रका लागि पनि मिहिनेत गरेको हुन्छ । तसर्थ मानिस सफल हुनका लागि अभ्यासको जरुरत पर्दछ । जति धेरै अभ्यास त्यतिधेरै मानिस सफलताको सिढी उक्लिन्छ ।
२०७७ असार ३० गते प्रकाशित
सफलताको रोडम्याप हो क्रम भंगता
प्रेरक प्रसंग : प्रेम सफलताको ढोका हो
प्रेरक प्रसंग : दृढ संकल्प र विश्वास भए उमेरले केही फरक पार्दैन
भगवान् कहाँ छन्, तपाईलाई थाहा छ ?